'छक्का पन्जा-२' युट्युबमा हेर्नुभयो ? युट्युबमा नहाल्दा गालि, हालेपछि झनै गालि (पुरा फिल्म सहित) - www.dthreeonline.com
‘छक्का पन्जा-२’ युट्युबमा हेर्नुभयो ? युट्युबमा नहाल्दा गालि, हालेपछि झनै गालि (पुरा फिल्म सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०७, २०७६ समय: १२:२९:०५
ईटहरी/ धेरैले युट्युबमा प्रतीक्षा गरेको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म “छक्का पन्जा २” अब भने युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको छ । दिपक दिपाको “छ माया छपक्कै” प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा केही साल अघि सार्बजनिक प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मलाई युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको हो । सार्बजनिक पश्चात् कमेन्टहरु पनि आएका छन्, तर धेरै कमेन्टमा फिल्म नराम्रो लागेको प्रतिक्रिया संगै गालि आईरहेको छ । हेर्नुस पूरा फिल्म ।
केहीले “छक्का पन्जा २ युट्युबमा नहालेको रिसले छ माया छपक्कै हेर्न मान्छे हलसम्म पुग्दैन भनेर दिपकले यो फिल्मलाई युट्युबमा हालेछ” भनेर व्यंग्य गरेका छन् । यता फिल्मको भ्युज भने १६ घण्टा नपुग्दै ९ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ भने ट्रेण्डिङ्गको यात्रा पनि सुरु भएको छ । हलमा ब्लकबस्टर बनेको छक्का पन्जा सिरिजको तेस्रो भाग पनि हलमा प्रदर्शन भैसकेको छ ।